Indlela yokwenza i-Chromatografi ngeefomati ze-Candy neKafesi
Unokwenza iphepha le-chromatography usebenzisa i-filter filter ukuze uhlukanise iingubo ezinemibala enemibala, njenge-Skittles ™ okanye iM & M ™ candy. Lo luvavanyo olumakhaya olukhuselekileyo, lukhulu kuminyaka yonke.
Ixesha elifunekayo: malunga neyure
Iifayile zekhofi zihlala zijikeleze, kodwa kulula ukuthelekisa iziphumo zakho ukuba iphepha libala. Ngoko, umsebenzi wakho wokuqala kukunquma ifafile yekhofi kwisikwere. Ukulinganisa nokusika i-3x3 "(8x8 cm) kwisikwere ukusuka kwisihlunu sekhofi.
Ukusebenzisa ipencilisi (inkenki ukusuka kwipeni iya kuhamba, ngoko ipencilisi ingcono), gwala umgca 1/2 "(1 cm) ukusuka kumgca kwelinye icala lephepha.
Yenza amanqaku amathandathu eepencil (okanye nantoni na imibala emininzi ye-candy) kulo mgca, malunga ne-1/4 "(0.5 cm) ngaphandle. Faka ngaphantsi kwiteksi nganye, bhala umbala we-candy uya kuvavanya kuloo ndawo. unayo indawo yokubhala igama lombala wonke. Zama B ngokuba luhlaza okwesibhakabhaka, G ukuluhlaza, okanye into elula ngokulinganayo.
Amanzi amaninzi 6 (okanye nayiphi na imibala emininzi ovavanya ngayo) ngokulinganayo kwiplani okanye kwisiqwenga se-foil. Beka i-candy enye yombala ngamnye kumaconsi. Nika umbala malunga nomzuzu ukuba ungene emanzini. Thatha i-candy uze uyidle okanye uyilahle.
Gcoba i-toothpick ibe ngumbala uze udibanise umbala kwifowuni yecencil yombala. Sebenzisa i-toppick ecocekileyo yombala ngamnye. Zama ukugcina idotshana ngalinye elincinci kangako. Vumela iphepha lokucoca ukuba lomile, uze ubuyele kwaye ungeze umbala ogqithisiweyo kwinqanaba ngalinye, ngokuphindwe kathathu, ngoko unamabala amaninzi kwisampuli nganye.
Xa iphepha limile, lifake ngesiqingatha kunye needampu zamachashaza kumbala. Ekugqibeleni, uya kumela eli phepha kwisisombululo setyuwa (kunye nenqanaba elisezantsi elingaphantsi kwamachaphaza) kunye nesenzo se-capillary siza kutywala i-shed paper, ngokusebenzisa amachaphaza, nakwiphepha eliphezulu lephepha. Iingubo ziza kwahlukana njengoko umbane uhamba.
Lungisa isisombululo setyuwa ngokuxuba i-1/8 isipuni setyuwa kunye neethathu zeekomityi zamanzi (okanye i-1 cm 3 ityuwa kunye ne-1 litre yamanzi) kwi-pitcher ecocekileyo okanye i-2 litre ibhodlela. Gcobhoza okanye ugxininise isisombululo kude sitshatyalaliswe. Oku kuza kuvelisa isisombululo se-1% setyuwa.
Phalaza isisombululo setyuwa kwisilayidi ephakamileyo ukuze i-1/4 "ibe yi-0.5 cm." Ufuna ukuba inqanaba libe ngaphantsi kweedampu zeesampuli. Ungazijonga ngokukubamba iphepha ngokuchasa ngaphandle kweglasi Ukukhupha isisombululo sesityuli esincinci xa umgangatho uphezulu kakhulu. Emva kokuba le nqanaba lichanekile, yima iphepha lokucoca ngaphakathi kweglasi, kunye necatshulwa phantsi kunye nomgca wephepha elixutywe yisisombululo setyuwa.
Isenzo seCapillary siya kutshintsha isicombululo setyuwa. Njengoko idlula kumachaphaza, iya kuqala ukuhlula idayi. Uza kubona imibala ye-candy iqukethe idayi enye. Idayi ehlukeneyo ngenxa yokuba ezinye idayi ziyakwazi ukunamathela ephepheni, ngelixa ezinye idayi zinamanzi amaninzi . Kwiphepha le-chromatography , iphepha libizwa ngokuthi 'isigaba esisigxina' kwaye amanzi (ityuwa) abizwa ngokuthi 'isigaba seselula'.
Xa ityuwa yamanzi ingama-1/4 "(0.5 cm) ukusuka kumgca ophezulu wephepha, yikhuphe kwiglasi uze uyibeke kwindawo ecocekileyo, ephahleni ukuze yome.
Xa ifayili yekhofi iyomile, thelekisa iziphumo ze-chromatography yemibala eyahlukeneyo ye-candy. Ziziphi ii-candies eziqukethe idayi efanayo? Lawa ma-candies anamaqela afana nombala. Ziziphi ii-candies eziqukethe idayi ezininzi? Lawa ma-pandi ayenamalungu amaninzi. Ngaba unokufanisa nayiphi na imibala ngamagama edayi ezidweliswe kwiisithako zamacandi?
Unokuzama oku kuhlolwa ngamakishi, umbala wokutya, kunye namaxube okuphuza. Unokuqhathanisa umbala ofanayo weekhethi ezahlukeneyo. Ingaba ucinga ukuba iingubo ezihlaza kwi-M & Nks kunye ne-Skittles eziluhlaza zifana? Ungayisebenzisa njani iphepha le-chromatography ukufumana impendulo?
Izikhephe okanye ama-p & M
ipiliti okanye ifowuni
imbiza okanye i-2-litre ibhotile
iikomityi / iipuni
Indlela Yokukhulisa Amakristali eSiliva
Izinto ezenziwayo ngeLiquid nitrogen
Yenza i-Hot Hot kwiVirgesi kunye ne-Baking Soda
Indlela yokwenza ukukhanya kwiInki ebumnyama
Ukulingana kweMicimbi phakathi kweBhaking Soda neVinegar
Indlela yokwenza Inkino
I-Ice Ice Cream Recipes
Imiba enomdla ngeNew Orleans
UAnandra George - Cela Umqeqeshi Wobomi beKholam
Lakshmi: Uthikazikazi wamaHindu woButyebi noBumnandi
Ngubani ozalele iTennis?
Imbali kunye nesimo se-MAVNI Programme
Iimviezo eziPhakanyisiweyo zoTitshala
Ziziphi izinto ezibonakalayo iRC Airplanes?
UYesu Uphilisa Umfana Omoya Ongcolileyo, Ukuhlushwa (Marko 9: 14-29)
Ngaphakathi kwezindlu zaseJapan zaseShigeru Ban
Iintlanganiso zezingane ezingaziwayo
Ukudibana noRute: U-Ancestor kaYesu
Indlela Yokuthetha Ubusuku Bumnandi (Oyasuminasai) ngesiJapan
Iingxoxo zoLwimi lwesiTaliyane: iMandare
Ukukhutshwa kweeDiski zeeAlbum zeMatriki ezinokutsha
Ingaba uhlalutya lomoya olungcono luya kuphucula uqoqosho lwamafutha Siza kufumana ...
Konke malunga neMettre - I-verb engaqhelekanga yesiFrentshi
Amagama, iMisebenzi, kunye neeNdawo zeMigodi ye-Cranial
Ngubani Owona Mntu Ogqithisekayo Ongazange Athethe?
Ukuhlaziywa ngokubanzi kweNkqubo yoLwazi lweNkwenkwezi
Indlela yokufaka iVoltmeter kwiBhendi yakho
I-Top 10 Funny Funny Honest Trailers
Imibala yePaint Colors - Isikhokelo Sokuhlanganiswa Okukhulu
I-Aqiqah: Ukubhiyozwa kwamaSulumane okwamkela umntwana omtsha
2016 Volvo S60 Cross Cross test drive